Fikrada adduunka FSX
Su'aal Fikrada adduunka FSX
1 sano 4 bilood ka hor #920 by NitroUK
Waxaan la yaabay haddii qof uu ogaa addon in uu ii saameyn doono saamiga dabka on my mouse mouse sidaas darteed marka markii habeenkii iyo diyaaradahaygu waa qabow iyo madow waxaan arkayaa furayaasha waxaan u baahanahay inaan u jeedo si loo helo diyaaradda bilaabay / iftiin ...
Ma jiraan wax sidan oo kale ah oo sidan ah? qof ayaa laga yaabaa inuu sameeyo? canshuurta ayaa si farxad leh u bixineysa addon.
Jacaylka ugu wanaagsan Glenn - G-VODC
"Meelaha buluugga ah ... Flying Safe"
1 sano 4 bilood ka hor - 1 sano 4 bilood ka hor #930 by DRCW
Haa, waan ku talin lahaa tan sababta oo ah sida ay u fadhiisto, tilmaamaha midigta ayaa keligiis garaacaya FPS, isagoo intaa ku daray in tani ay tahay mid kale oo khasaare gaarsiisan. Baaskiilada ugu fiican waa in la isticmaalo nalalka daaqadda ee xilliga diyaarinta duulimaadka. Iska hubi inaad adigu firfircoon tahay APU (Aux Power Unit) oo loogu talagalay diyaaradaha u qalabaysan.